६२ बर्षे सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको तेस्रो विवाह , को हुन् बधु ? - Onlinesamaya.com
६२ बर्षे सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको तेस्रो विवाह , को हुन् बधु ?
असार २३, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले तेस्रो विवाह गरेका छन्। बुढ्यौली लाग्दै गर्दा सहाराको खोजीमा रहेका कार्कीले आइतबार लगनगाँठो कसेका हुन्।
पूर्व अर्थ मन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले राजधानीको त्रिपुरेश्वरस्थित बोगेनभिल्ला व्याङ्क्वेटमा राणा परिवारकी युवतीसँग बिहे गरेको पारिवारिक स्रोतले जनायो।
६२ वर्षीय कार्कीकी दोस्री पत्नीको एक वर्ष अगाडिमात्रै निधन भएको थियो। राणा परिवारबाटै रहेको आवु राणाको क्यान्सरका कारण निधन भएको हो। त्यसपछि बुढेसकालको लाठी खोज्ने क्रममा उनलाई राणा परिवारबाटै बधु मिलेको हो।
सांसद कार्कीकी तेस्री श्रीमतीका रुपमा भित्रिएकी राणा परिवारकी युवती हुन्, नविना शमशेर। दोस्री श्रीमती आबु पनि राणा परिवारबाटै भएकाले उनको अवस्थालाई ससुरालीले विशेष सम्बोधन गरेका हुन्।
जयशमशेर राणा र मिलन राणाकी छोरी नवीना निजी व्यवसायमा संलग्न छिन्। ३६ वर्षीया उनको यो पहिलो विवाह भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। नविनाका बुबा र आमाको यसअघि नै मृत्यु भइसकेकाले उनलाई दाजु भाउजुले कन्यादान दिएका हुन्।
काभ्रेमा ‘सिरिन्ज आक्रमण’लाई लिएर तनाव उत्पन्न
साग तीन पटक सर्‍यो , अब सर्नु हुँदैन – नवनियुक्त सदस्य सचिव सिलवाल